Ny pretra Rakotoarison Hilarion : “Mila mahomby amin’ny fanarenam-pirenana ny kristianina “ | NewsMada
Ny pretra Rakotoarison Hilarion : “Mila mahomby amin’ny fanarenam-pirenana ny kristianina “
Lasa resaka tato ho ato ny amin’ny fivavahana sy ny fandraisana andraikitra amin’ny fanarenana ny firenena. Mila ny kristianina ny fanarenam-pirenana, raha ny vela-kevitry ny ny pretra Rakotoarison Hilarion.
“Nahoana no tsy mahomby ny kristianina? Tsy mitsaha-midina ny fari-piainan’ny Malagasy tsirairay. Nefa samy kristianina na samy milaza azy ho izany avokoa ireo mpitondra.” Tenin’ny pretra s. j. Rakotoarison Hilarion tamin’ny vela-kevitra, nokarakarain’ny Ami de Lakroa, teny amin’ny Ivontoerana sosialy Arrupe, Ekar Faravohitra, omaly. Nifantohana tamin’izany ny lohahevitra hoe: “Ny olom-pirenena kristianina sy ny politika araka ny fampianarana ara-tsosialin’ny fiangonana”.
Ny antony mahatonga izay fitotonganam-piainana izay: nanampy trotraka ny efa tsy fahombiazana sy ny fahadisoany teo aloha hatrany ny mpitondra nifandimby. Samy milaza izay tonga eo amin’ny fitondrana fa ny teo aloha no tomponandraikitra amin’ny fahantrana misy. Hatramin’izay, tsy tonga saina isika amin’ny fanaovana politika tsy mahomby: mihamijotso hatrany, mifanipaka an-toerana…
Notsiahiviny ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny eveka, ny 10 novambra 2016: “Tsy mahantra harena, tsy mahantra olomanga, tsy mahantra manampahaizana… fa i Madagasikara no mahantrana olon-kendry sy manam-panahy.” Eo koa ny nambaran’ny filoha amerikanina J. Kennedy ny amin’ny tsy tokony hanontaniana izay ataon’ny firenena ho an’ny tena, fa izay ataon’ny tena ho an’ny firenena.
Fikendrena ny soa iombonana ny politika
Fikendrena ny soa iombonana no antom-pisian’ny fianakaviamben’ny mpanao politika, araka ny konsily Vatican can II, taona 1965. Eken’ny fiangonana ny demokrasia sy ny fisian’ny tsangan-kevitra samihafa ananan’ny kristianina amin’ny politika. Tsy mifampiankina ny asan’ny fanjakana sy ny fiangonana. Tsy miditra amin’ny politika ny ny fiangonana, raha tsy ny momba ny ara-moraly sy ara-panahy na resaka politika aza.
Anjaran’ny fiangonana ny manofana ara-moraly sy ara-panahy ny laika, izay manana anjara amin’ny famadihana izany ho hery politika hanasoavana ny mpiara-belona. Ny amin’izao fotoana izao, voaantso hanasoa ny fiarahamonina misy azy ny kristianina rehetra, mikendry lalandava ny soa iombonana, araka ny hafatry ny papa François, taona 2013, na samy manana ny anjarany aza ny laika sy ny mpitondra fiangonana.
Aiza ho aiza ny tsirairay amin’izany? Maro tamin’ny mpanao politika sy ny avy amin’ny firaisamonina sivily no tonga nanatrika ny famelabelarana, izay narahina adihevitra.
Izay tsara fiomanana, tsy andairan’ny tampoka 22/01/2022
Rugby : Madagascar entame les préparatifs des rendez-vous continentaux 22/01/2022